OnionShare: kula wadaag faylashaada hab aamin ah oo qarsoodi ah | Laga soo bilaabo Linux
OnionShare: kula wadaag faylashaada hab aamin ah oo qarsoodi ah
Shaki la'aan, inta badan akhristayaasha boggan wax ka ogow Tor ama maqlay, Waa hagaag tan waa biraawsar shabakadeed oo ka walwalsan asturnaanta isticmaalaha waana sababtaas awgeed waxay noqotay mid kamid ah daalacashada ugu caansan uguna adeegsiga badan ujeeddooyinkan.
Waxyaabaha kale ee lagu garto Tor waa adeegsiga shabakadeeda ku caan baxday isku xidhka .onion kaas oo kaliya looga heli karo adeegyada Tor. Adeegsiga noocan ah adeegsiga badanaa waa mid aad waxtar u leh marka la doonayo in la helo qarsoodi weyn, waana sababta maanta aan uga hadli doonno dalab ku saleysan adeegyadan.
1 Ku saabsan OnionShare
2 Sidee loo rakibaa OnionShare Linux?
Ku saabsan OnionShare
Basasha Wadaag waa codsi ina siinaya awood aan ku wadaagno feylal kasta oo cabbir ah si badbaado leh oo qarsoodi ah. Waxay ku shaqeysaa iyada oo la bilaabayo server-ka websaydhka, taas oo ka dhigaysa mid loo heli karo adeeg ahaan Tor, waxayna soo saartaa URL aan la aqbali karin si loo helo loona soo dejiyo faylasha.
Uma baahna abuuritaanka adeege gaar ah ama adeegsiga qayb wadaag fayl saddexaad ah.
Adigu ku martigeliyaan feylasha kombiyuutarkooda una adeegsadaan adeegga Tor-ka si ay si ku-meelgaar ah uga helaan internetka. Isticmaalaha qaata wuxuu kaliya u baahan yahay inuu furo URL-ka biraawsarka Tor si uu u soo dejiyo faylka.
Onionshare waxay ku shaqeysaa iyada oo la abuurayo cinwaan ku meel gaar ah ".onion" inaad la wadaagi karto saaxiib. Markaad dhamaysid, jooji wadaagista cinwaankuna hadda ma sii shaqeynayo.
OnionShare waxay leedahay fursado jiita-iyo-hoos u dhigis ah oo loogu talagalay faylasha iyo faylalka, sidaa darteed waxaad si fudud ugu diri kartaa ama u soo dejisan kartaa iyaga oo adeegsanaya qasabno dhowr jiir ah.
Ma jiro xad u gaar ah cabbirka wadaagista ama soo dejinta faylasha iyo faylalka, sidoo kale waad wadaagi kartaa lambar kasta oo feylal ah / fayl hal mar.
Mar alla markii aad bilowdid codsigan, wuxuu si otomaatig ah ugu koobiyeyn doonaa URL-ka la wadaago boodhka isla markaana si otomaatig ah ayuu u xirayaa ka dib hawlgalku markuu dhammaado
Sidee loo rakibaa OnionShare Linux?
Si doonaya inay ku rakibaan codsigan kombiyuutarkooda, waa inay furaan terminal oo ay shaqeeyaan amarrada ku saabsan qaybintaada Linux ee aad isticmaaleyso.
Kuwa adeegsada Ubuntu ama wax uun ka soo jeeda, waa inaan ku darnaa bakhaarka nidaamka, waxaan ku sameeynaa amarkan:
Marka tan la dhammeeyo, waa inaan cusbooneysiinno liistadayada:
Ugu dambeyntiina waa inaan ku rakibnaa arjiga:
Xaaladda kuwa isticmaala Fedora ama Qaybinta ku saleysan tan ku rakib barnaamijka:
Si yihiin Arch Linux, Manjaro ama adeegsadayaal soosaara, waxaa jira PKBUILD oo laga heli karo AUR, markaa si loo rakibo arjiga waa inaan ku karnaa faylkeena pacman.conf.
Waxaan ku rakibnaa OnionShare oo leh:
para Inta kale ee qeybinta Linux waa inay soo dejistaan ​​koodhka isha ee arjiga oo samee isku duwidda.
Si waa kuwa adeegsada nidaamyada ku saleysan Debian waa inaan marka hore ku rakibno qaar ka mid ah ku tiirsanaanta:
Hadda waa inaan kala soo baxnaa koodhka isha ee aan sidan ku sameyno adoo garaacaya:
Y waxaan ku dhisi karnaa xirmada deynta ee nidaamkeena nidaamka:
Ama haddii aad doorbido, waxaad ku bilaabi kartaa arjiga adigoo:
Haddii aad rabto in arjigu ku shaqeeyo interface interface:
Tan, codsiga waa in lagu furaa, isku xirkiisu waa mid dareen leh. Adeegyada Tor waa inay socdaan si loo isticmaalo OnionShare.
Markay doortaan feylka ay rabaan inay wadaagaan ama xitaa galka ay la socdaan dhammaan waxyaabaha ku jira gudaha, dalabku wuxuu isla markiiba siin doonaa URL ay wadaagi karaan.
Si la mid ah, waxaa muhiim ah in la xusuusto haddii aad rabto ikhtiyaarrada ugu weyn, isticmaal nidaamka sirta si aad ula wadaagto xiriiriyeyaashaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » OnionShare: kula wadaag faylashaada hab aamin ah oo qarsoodi ah
Hambalyo. Markii ugu horraysay muddo dheer, oo aan raaco amarrada konsalka ee warqadda wayna shaqaysaa. Midka kaliya ee aan ka booday wuxuu ahaa midka: git clone https://github.com/micahflee/onionshare.git
Hagaag, waxaan toos ugu aaday cinwaanka, waan soo dajiyay, waxaan abuuray buugga halkaana waan kasii waday. Hada waan tijaabinayaa.
Salaan iyo jabsi wacan
Ku jawaab eulalio b
Dhadhankayga iyo baahiyadayda, waxa ugu habboon ayaa ah in la isticmaalo Dabo (nidaamka qalliinka ku saleysan ee ku saleysan debian) ayaa horay loo sii rakibay basasha oo wuxuu ka shaqeeyaa USB-ga. Dhinaca kale, dejinta adeege waa fududaan. Salaan ka timid Sito (adoo adeegsanaya Dabo laga soo diray USB oo ku xiran Tor)
Tifatiraha Qoraalka Suplemon: Tifatiraha qoraalka oo awood badan
Qalalan: maamule CLI oo is-dhexgal ah oo loogu talagalay weelasha Docker